Famatsiana :: Nidina ny vidim-bary eto an-drenivohitra • AoRaha
Nahitana fihenana ny vidim-bary eny amin’ireo mpanatsinjara eto an-drenivohitra, nanomboka tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Tsikaritra, ohatra, fa jifaina amin’ny vidiny 1 900 ariary ny iray kilao amin’ny vary Makalioka raha 2 100 ariary izany teo aloha kely teo. Lasa 1 800 ariary kosa, ankehitriny, ny kilaon’ ny vary gasy mena. Eo ihany koa ny vary Tsipala sy ny vary gasy mavokely, izay nidina ho 1 700 ariary ny iray kilao.
Tsara ny taom-pambolena tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro, izay sompitr’i Madagasikara amin’ny famatsiana vary, tamin’ity taona ity, ka izany no mahatonga izao fidinan’ny vidim-bary izao, araka ny fampitam-baovao nomen’ny minisiteran’ny Fambolena. Efa tonga eny anivon’ny tsena ny ampahany amin’ireo vokatra avy any amin’io faritra io.
“2,6 tapitrisa taonina isan-taona, eo ho eo, ny filàna amin’ny vary eto Madagasikara. Vokatra avy amin’ireo mpamboly eto antoerana ny roa tapitrisa taonina amin’ireo, ka ny faritra Alaotra Mangoro no mamokatra ny 27%. Tombanana ho 540 000 taonina isan-taona ny vary miakatra avy any any”, hoy ny fanampimpanazavana.
Anisan’ireo tetikasan’ny minisiteran’ny Fambolena ihany koa ny hampiakarana ny voka-bary hatramin’ny 3 tapitrisa taonina isan-taona mba hahafahantsika mizaka tena ara-tsakafo. Nolazain’ izy ireo fa efa dingana goavana amin’ny fanatrarana izany ny fampiasana ny masomboly “safiotra”, hiarahantsika miasa amindry zareo Sinoa. Eo ihany koa ny fitsinjovana an’ireo tantsaha amin’ny alalan’ny fanamboarana toho-drano sy fanajariana ny lemaka, ka hahafahana manitatra ny tany hambolena sy havitana mamboly indroa na intelo isan-taona.
Fanadinam-panjakana Vita rafitra ireo laza adina amin’ny Cepe sy Bepc
Fisorohana fahasemporana Omena tombondahiny ireo marary any amin’ny faritra
Fampitomboana mpiasa Handray mpiasan’ny fahasalamana arivo ny minisitera
Fihanaky ny valanaretina :: Maherin’ny fitonjato ny marary vaovao voan’ny Covid-19
Fitsaboana ny valanaretina :: Marary iraika amby efapolo amby zato indray sitrana tany an-tranony